Budata QuickTime maka Windows
Free Budata maka Windows (40.15 MB)
QuickTime Player, na-aga nke ọma media player mepụtara Apple, bụ mmemme na-adọta uche na ya larịị interface na mfe. MOV, QT etc. nke nwere àgwà oyiyi ọbụna na obere sized faịlụ. Na nke a pụrụ iche player e mere ka-egwu faịlụ formats, ị nwere ike mfe na-ekiri ihe nkiri trailers, nkwado vidiyo na online telivishọn ọwa.
Na ya dị mfe ọdịdị na ngwa ngwa Ọdịdị, QuickTime, nke ị nwere ike ịrụ ngwa ngwa, nwere ike imeghe ndị kasị ewu ewu video, ọdịyo na foto formats, ọbụna flash animations, e wezụga pụrụ iche formats. Nime usoro ndị a bụ ndị a;
Audio: AAC, AIFF, CDDA, MIDI, MP3, M4A, M4B, M4P, QCELP, ULAW, ALAW, WAV
Onyonyo: 3GPP, 3GPP2, BMP, JPEG, GIF, FLASH, SWF, DV, H.261, H.263, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QTZ, MOV, PNG, TIFF, TGA
Cheta na: Ị ga-ahụ na ụfọdụ taabụ na QuickTime menus na PRO logo na-adịghị na free version. Iji jiri ndị a atụmatụ na nhọrọ, ị ga-azụta QuickTime Pro, na-akwụ ụgwọ version nke QuickTime.
Nha faịlụ: 40.15 MB